Ozi kacha ọhụrụ banyere FDIs si Nigeria & ụwa | TAA
Gọvanọ Dickson na-ebuga ụgbọala na Africa CEO Forum na Cote d'Ivoire
Gov. Seriake Dickson nke Bayelsa ejirila ụgbọala maka Ntinye Akaụntụ nke Mba Ọzọ (FDIs) gaa n'ihu na Afrika na-aga n'ihu n'Africa Na-ahụ Maka Ọkwá na Abidjan iji gosipụta ohere dị iche iche na steeti.
Gọọmentị Federal kwadoro iji ego N1.3 mee ihe kwa afọ na nnukwu ụlọ ọrụ - ozi
Gọọmentị Gọọmenti kwuru na ọ bụ itinye ego maka nde ego N1.3 kwa afọ na nnukwu ụlọ ọrụ iji dozie ohere ọdịiche dị mkpa iji dọta ntinye ego n'ime obodo ahụ.
Afrika bu ndi oru 2030 - IMF isi Christine ...
Onye isi nchịkwa, Ego Monetary International (IMF), Nwanyị Christine Lagarde, kwuru site na 2030, ihe karịrị ọkara ndị ọrụ ọhụrụ ga-abanye n'ọrụ ụwa niile ga-esi n'Africa.
Ernest Bai Koroma Sierra Leone kpughere onye isi ya na obodo Naijiria
President nke Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, kpughere onye na-anọchite anya ya na onye uwe ojii nke na-achịkwa ndị niile na-achị achị (APC), Matthew Samura Kamara, na ndị Naijiria.
Lagos nyere 73% n 'ike nke Naijiria maka ịme ahịa - Gọvanọ Ambode
Lagos State naanị nyere 73 pasent na 2018 World Bank na Naijiria maka mfe nke ịzụ ahịa, njikwa asọmpi zuru ụwa ọnụ iji chọpụta ụkpụrụ azụmahịa, onye ọchịchị gọọmentị, Mr. Akinwunmi Ambode, kwuru.
Ụlọ akụ na-ebuli mkpuchi n'elu ọrụ nchịkọta ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ
Ụlọ akụ na-azụ ahịa akpalitewo mkpuchi maka ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị ahụ anya na-ekwu na ha ga-abụ ndị ha, na-etinye aka site na atụmatụ aghụghọ ma n'ebumnobi nke ịghọgbu ndị na-eto eto na-enweghị atụ.
Nbunye isi obodo Naijiria na-akpata $ 4 na nkeji atọ nke 2017 - NBS
Onu ogugu onu ogugu nke abia n'ime nkeji iri ato ka onu ogugu dolla dolla 4.1, nke choro okpukpu abuo na nkeji nkeji abuo, nke nnochite anya 147.5 percent karia kwa otu.
Na ndị 170m, Naijiria bụ ebe a na-ahọrọ ego na Africa
Anyị na-abịa na ITU Telecom World n'afọ ọ bụla iji kọọ akụkọ anyị, kọọrọ anyị ahụmahụ ma wepụta akwukwo sitere na omume kachasị mma zuru ụwa ọnụ iji dozie nchegbu anyị, soro na imekọrita ya na ndị ụwa niile iji mee ka ọganihu na ọrụ nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ Naijiria.